04/05/2018 - Page 2 sur 3 -
Ankorondrano : Mpanolana saika matin’ny fitsaram-bahoaka
04/05/2018 admintriatra 0
Lehilahy iray tratran’ny olona avy nanolana zazavavy 14 taona no saika matin’ny fitsaram-bahoaka teny amin’ny lalamby teny Ankorondrano omaly maraina. Araka ny angom-baovao natao teny an-toerana, dia notambazan’ity mpanolana ity vola 200 Ar io zaza …Tohiny
Manana toerana lehibe ny asa fanaovan-gazety manolona ny hetsika izay misy eo amin’ ny firenena iray, ary izany dia fitodihana mankany amin’ ny fitondrana fitoniana. Rehefa misy tokoa mantsy ny fiofanana momba ny asa gazety …Tohiny
Nifototra tamin’ny fitakiana amin’ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny zon’ny rehetra ny hetsika nataon’ireo solombavambahoaka mpanohitra hatrany am-boalohany raha ny filazan’izy ireo. Mazava anefa izao fa fanitsakitsahana ny lalàna sy ny zon’ireo olom-pirenena no ataon’izy …Tohiny
Toa ny isan-taona, manamarika ny 3 mey, andro maneran-tany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ihany koa i Madagasikara. Taorian’ny tany Mahajanga tamin’ny taona lasa, ny tanànan’i Toamasina indray no nampiantrano ny fankalazana ofisialy tamin’ity taona …Tohiny
Fandaharana isaka ny amin’ ny 8 ora sy sasany ao amin’ny haino aman-jerin’ny On Air TV ny tapatapak’ahitra, hanomezana toerana ireo kandidà hanazavany ny vina sy ny programan’asany. Miara- dalana amin’ izany ihany koa ny ...Tohiny